काठमाण्डौ – “कला र गला संरक्षण हाम्रो अभियान , अग्रजलाई सम्मान नवलाई प्रोत्साहन” भन्ने नाराका साथ एपिक नेपाल म्युजिक प्रा।लि।को आयोजनामा दोश्रो एपिक नेपाल म्युजिक अवार्ड २०७६ काठमान्डौमा हुने भएको छ । अवार्डमा नेपाली लोकदोहोरी, आधुनिक, पप , लोकपप र काठे र देउडा समाबेश गरिएको आयोजकले जनाएको छ । २०७५ साल जेष्ठ १ गते देखी
प्रेम जिन्दगी, प्रेम संसार, प्रेम भए मान्छेले के गर्न सक्दैन र ? सुन्दर घरको निर्माण प्रेमबाटै हुन्छ । मान्छे मान्छेमा प्रेम यदी हुन्न भने झगडा अनि कलह मात्रै हुन्छ । संसार आखिर प्रेमबाटै चलेको छ र युगौं चलि रहने छ । प्रेमकै कुरा गर्नुपर्दा गायिका रिता के. सि को स्वरमा मायाप्रेमले भरिएको थाहै नपाई तिम्रो
काठमाडौँ – नायिका नीता ढुङ्गानाको निर्माणमा बन्न लागेको फिल्ममा गायक तथा नायक कोशिस क्षेत्री फाइनल भएका छन् । खबर अनुसार नीता फिल्म प्रोडक्सन हाउस र नायक कोशिस क्षेत्री बिच सम्झौता भइसकेको छ । फिल्ममा कोशिस क्षेत्री र नीता ढुङ्गाना मुख्य भुमिकामा रहनेछन् । फिल्मलाई समुन्द्र भट्टले निर्देशन गर्दैछिन् । फिल्मको मुख्य लिड फाइनल भए पनि